Filipifo 1 | Intanɛt So Bible| Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
Ɔde Kɔmaa Filipifo 1:1-30
Paul daa Onyankopɔn ase; ne mpaebɔ (3-11)
Ɔhaw nyinaa akyi, asɛmpa no nya nkɔso (12-20)
Mete ase ma Kristo; miwu a, ɛyɛ mfaso (21-26)
Momma mo abrabɔ mfata asɛmpa no (27-30)
1 Paul ne Timoteo, Kristo Yesu nkoa; yɛde krataa yi rekɔma Filipi+ akronkronfo a wɔwɔ Kristo Yesu mu nyinaa, ahwɛfo ne asafo mu asomfo+ nyinaa ka ho: 2 Yɛn Agya Onyankopɔn ne Awurade Yesu Kristo adom ne asomdwoe nka mo. 3 Bere biara a mɛkae mo no, meda me Nyankopɔn ase 4 wɔ me nkotosrɛ nyinaa mu. Mede anigye srɛ ma mo,+ 5 efisɛ efi da a edi kan besi nnɛ, moaboa ama asɛmpa no anya nkɔso. 6 Awerɛhyem a mewɔ ne sɛ, nea ofii adwuma pa ase wɔ mo mu no, Kristo Yesu da no bɛba+ no, na wawie.+ 7 Moda me koma so, enti sɛ minya saa adwene yi wɔ mo nyinaa ho a, ɛyɛ ne kwan so, efisɛ me nkɔnsɔnkɔnsɔn mu,+ ne asɛmpa no a mebɔ ho ban mmara kwan so+ no nyinaa mu no, motaa m’akyi, enti me ne mo nyinaa anya adom no mu kyɛfa. 8 Onyankopɔn ne me dansefo sɛ m’ani agyina mo nyinaa. Sɛnea Kristo Yesu pɛ mo asɛm no, saa ara na me nso mepɛ mo asɛm. 9 Me mpaebɔ ne sɛ mo dɔ nkɔ so nyɛ kɛse,+ na munnya nokware nimdeɛ+ ne ntease a ɛkɔ akyiri nso.+ 10 Mebɔ mpae sɛ mobɛhwehwɛ mu ahu nneɛma a ehia paa+ no, sɛnea ɛbɛyɛ a dɛm biara remma mo ho, na moanto afoforo hintidua+ kosi Kristo da no. 11 Afei nso, me mpaebɔ ne sɛ trenee aba+ a Yesu Kristo ama moasow no, ɛso mmra mfaso pii mma mo, na monam so ahyɛ Onyankopɔn anuonyam, na moayi no ayɛ. 12 Afei anuanom, mepɛ sɛ muhu sɛ nea ato me no ama asɛmpa no anya nkɔso mmom, 13 efisɛ nkɔnsɔnkɔnsɔn a Kristo nti wɔde agu me+ no, Aban Awɛmfo nyinaa ne nnipa a aka nyinaa ate ho asɛm.+ 14 Wɔn a wɔwɔ Awurade mu no, m’afiase nkɔnsɔnkɔnsɔn no ama wɔn mu dodow no ara anya ahotoso, na saa anuanom no nyinaa de akokoduru kɛse reka Onyankopɔn asɛm a wonsuro. 15 Ɛwom, ebinom de anibere ne ahoɔyaw na ɛreka Kristo ho asɛm, nanso ebinom de adwempa na ɛreka. 16 Wɔn a wɔde adwempa ka no, ɔdɔ nti na wɔbɔ Kristo ho dawuru, efisɛ wonim sɛ wɔapaw me sɛ minnyina asɛmpa no akyi;+ 17 nanso wɔn a wɔde anibere ne ahoɔyaw reyɛ saa no yɛ mansotwefo a wonkura adwempa, na wɔn adwene ne sɛ wɔbɛma me ho ahiahia me wɔ me nkɔnsɔnkɔnsɔn mu. 18 Dɛn na afi mu aba? Ɛno ara ne sɛ akwan nyinaa mu no, sɛ nnaadaa na wɔde yɛ oo, nokwaredi na wɔde yɛ oo, wɔrebɔ Kristo ho dawuru, na midi eyi ho ahurusi. Na mɛkɔ so adi ho ahurusi, 19 efisɛ minim sɛ eyi bɛma manya nkwa esiane mo nkotosrɛ+ ne Yesu Kristo honhom+ nti. 20 Ɛno na mehwɛ kwan denneennen na m’ani da so, na minim sɛ m’ani renwu ɔkwan biara so, na mmom sɛnea akɔ so abesi nnɛ no, nkwa mu oo, owu mu oo, menam me nipadua so de akokoduru bɛkamfo Kristo.+ 21 Na me de, sɛ mete ase a, mete ase ma Kristo;+ sɛ miwu nso a, ɛyɛ mfaso ma me.+ 22 Na sɛ mekɔ so tena ase ɔhonam mu a, m’adwuma no bɛsow aba, nanso nea mepɛ paa de, menka ho asɛm. 23 Nneɛma abien yi, minhu nea eye ma me, efisɛ me yam a, anka manya me ho atetew akɔka Kristo ho,+ na anka ɛno mpo na eye.+ 24 Nanso mo nti, ehia sɛ mekɔ so tena ase ɔhonam mu. 25 Awerɛhyem a mewɔ wɔ eyi mu nti, minim sɛ mɛtwɛn ne mo nyinaa atena ɔhonam mu, na moanya nkɔso ne anigye wɔ gyidi no mu, 26 sɛnea ɛbɛyɛ a, bere a maba mo nkyɛn bio no, me nti mubedi ahurusi aboro so wɔ Kristo Yesu mu. 27 Nea mepɛ ara ne sɛ mobɛma mo abrabɔ afata Kristo asɛmpa no,+ sɛnea ɛbɛyɛ a, sɛ meba behu mo anaasɛ minni hɔ mpo a, mɛte mo ho asɛm sɛ mugyina pintinn wɔ honhom koro mu, na mode ɔkra koro*+ di apere ma gyidi a egyina asɛmpa no so no, 28 bere a mommma mo atamfo nnhunahuna mo ɔkwan biara so. Eyi yɛ adanse a ɛkyerɛ sɛ wɔbɛsɛe wɔn,+ nanso ɛkyerɛ nkwagye ma mo,+ na efi Onyankopɔn hɔ, 29 efisɛ mo na Kristo nti wɔde hokwan no maa mo, na wɔamfa amma mo sɛ munnya ne mu gyidi kɛkɛ; wɔde maa mo sɛ munsi n’ananmu nhu amane nso.+ 30 Nea ɛwom ne sɛ, aperepere a muhui sɛ meredi+ na migu so redi no, ɛno ara bi na morefa mu.
^ Anaa “mode baakoyɛ.”